​हिजो र आजको पत्रकारिता
४ मङ्सिर २०७४
शम्भु श्रेष्ठ । दृष्टि साप्ताहिक आजदेखि ३५ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । नेपाली पत्रकारिताको इतिहासमा पैतीस वर्ष छोटो अवधि भने होइन । यस अवधिमा धेरै पुराना साप्ताहिक पत्रिकाहरु बन्द भए भने धेरै नयाँ पत्रिकाहरुको जन्म भयो । आज नेपाली पत्रकारिताको विकासलाई हेर्ने हो भने यो क्रम कहाँ गएर टुंगिन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने सूचना प्रविधिको विकासले मानिसको हात हातमा मिनेट मिनेटमा सूचना… विस्तृत समाचार
शम्भु श्रेष्ठ । लोकतन्त्रमा आलोचना, विरोध गर्न पाइन्छ । तर, त्यो विरोध र आलोचना रचनात्मक भयो भने मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ । तर, हामीकहाँ यो संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन । जसले गर्दा नेताहरुको भाषणले वर्षौदेखि गाउँका सोझा जनता ठगिने गरेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण लिने हो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौंकै चुनावी सभाहरुमा शिक्षित र सचेत समुदायबीच झुठो बोलेर आफ्नै गरिमा घटाएका छन्… विस्तृत समाचार
​वीपीको बाटोमा कांग्रेस
२० कार्तिक २०७४
शम्भु श्रेष्ठ । नेपालको राजनीतिमा ढिलै भए पनि विचार मिल्ने वामपन्थीहरुबीच चुनावी गठबन्धन बनेको छ । विचार मिल्नेहरुबीचको गठबन्धन स्वभाविकै भए पनि विचार नमिल्नेबीच कांग्रेसले जुन लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएको छ, त्यो अन्ततः कांग्रेसकै लागि मात्र नभएर देशकै लागि दुर्भाग्य बन्न सक्छ । राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको मुद्दा बोकेको राप्रपालाई लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा ल्याएको कांग्रेसले कि त राजतन्त्र स्वीकारेर वीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको बाटोमा जानु प¥यो । कि त गणतन्त्रको… विस्तृत समाचार
१३ कार्तिक २०७४
शम्भु श्रेष्ठ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको चुनावी तालमेलले नेपालको राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ । यस गठबन्धनले अब हुने केन्द्र र प्रदेशको चुनावमा कस्तो परिणाम आउँछ र त्यसपछिको सहकार्य कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा नहेरी अहिले नै यो तालमेलबाट मात्तिने र आत्तिने कुरा आउँदैन । किनभने अहिले पनि प्रचण्डमाथि धेरैले शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेका छन् । आफूलाई जता फाइदा हुन्छ उतै हुत्तिने प्रचण्ड प्रवृत्ति निर्वाचन… विस्तृत समाचार
​वाम ए–कता ?
३० आश्विन २०७४
शम्भु श्रेष्ठ । एमाले–माओवादी एकताले राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र होइन, नेपालको राजनीतिमा गहिरो चासो राख्ने अन्तराष्ट्रमा समेत तरंग ल्याएको छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा वाम तालमेल गरेर अन्ततः विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच एकता प्रयास गर्ने यसको उद्देश्य हो भनिएको छ । नेपाली जनताहरु ०४८ सालदेखि नै एक वाम एक ठाम चाहन्थे । तर, विभिन्न वाम घटकको आ–आफ्नै स्वार्थ र विदेशी चलखेलका कारण नेपाली जनताका चाहाना… विस्तृत समाचार
९ आश्विन २०७४
शम्भु श्रेष्ठ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधान विश्वकै लागि उदाहरणीय भएको कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई जानकारी दिए । हुन त २०४७ सालको संविधानलाई पनि हामीले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान नभनेका होइनौं । कुनै पनि संविधान आपैmँमा खराब हुँदैन । त्यो संविधानको पालना कसरी गरिएको हुन्छ भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ । २०४७ सालको संविधान उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन कांग्रेस सरकारको कुशासनका कारण माओवादी जन्मियो र… विस्तृत समाचार
शम्भु श्रेष्ठ । चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ । यो सय दिनभित्र देउवाले जनताका लागि खासै केही काम गर्न नसके पनि सय दिन पूरा भएकोमा यसैलाई ठूलो उपलब्धि मानेको छ । वास्तवमा देउवाको सरकार देश र जनताका लागि केही गर्न होइन, भारतको इशारामा संविधान संशोधन गर्न बनेको सरकार हो । तर, ऊ यस पटक संविधान संशोधन गर्न असफल… विस्तृत समाचार
२७ भाद्र २०७४
शम्भु श्रेष्ठ । राजनीतिलाई विकृति र विसंगतिबाट जोगाउन सकिएन भने लोकतन्त्र कुरुप हुँदै जान्छ । त्यस्तो अवस्थामा जनता चरम निराशामा पुग्छन् र आन्दोलित बन्छन् । नेपालको राजनीति हरेक दश दश वर्षमा परिवर्तन हुनुको मुख्य कारण पनि यही नै हो । हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा जनताको सहभागिता हुने गरेको छ । त्यसको अर्थ जनताले राजनीतिक परिवर्तनबाट सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । राजनीतिक परिवर्तनपछि… विस्तृत समाचार
१९ भाद्र २०७४
शम्भु श्रेष्ठ । जुन देशको संसदमा भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागूऔषध बिक्री, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोगलगायतका कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष कैद सजाय पाएका अपराधीलाई पनि निर्वाचन लड्न दिनुपर्छ भनेर बहस चल्छ, त्यो देशका सांसदबाट जनताले के आशा राख्ने ? संसदमा अहिले यो छलफलको विषय बनेको छ । यसै घटनाबाट थाहा हुन्छ हाम्रा मन्त्री, सांसद कति भ्रष्ट र अपराधिक मनोवृत्तिका छन् भन्ने कुरा ।… विस्तृत समाचार
१२ भाद्र २०७४
शम्भु श्रेष्ठ । – भदौ ४ गते आइतबार विशेष अदालतका न्यायाधीश पवनकुमार शर्मा, बाबुराम रेग्मी र प्रभा बस्नेतको इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा दीपक मनांगेलाई सफाई दिइएको खबर प्रकाशित भयो । मनांगेविरुद्ध २०७० जेठ ५ गते १४ करोड ७३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बराबरको अवैद्य सम्पत्ति राखेकोे आरोप थियो । – सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई बिना धरौटी रिहा गर्ने आदेश दियो ।… विस्तृत समाचार